Mhirizhonga Yemhirizhonga Inopararira muParis Pamusoro Pemutemo Unotarisirwa COVID-19 Jabs uye Hutano Vanopfuura
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » France Kuputsa Nhau » Mhirizhonga Yemhirizhonga Inopararira muParis Pamusoro Pemutemo Unotarisirwa COVID-19 Jabs uye Hutano Vanopfuura
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • France Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Kodzero Dzevanhu • nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Mhirizhonga ine mhirizhonga inoitika muParis pamusoro pesimba rinogadziriswa COVID-19 jabs uye hutano kupfuura
"Kupfuura hakungapfuuri!" yaive rwiyo rwevaratidziri vakakomba chivakwa chedunhu muNantes.
Kuratidzira kweMisa kwese muFrance kwakaitika paBastille Day.
Kurwisana kune chisimba kwakamuka pakati pevaratidziri nemapurisa muParis.
Mapurisa akaridzira misodzi yemisodzi kune vairatidzira avo vakakanda matombo nemabhodhoro, vakaisa midziyo yekuvaka pamoto muParis, uye vakanhonga zvivakwa zvehurumende.
Zviuru zvevaratidziri vaenda kumigwagwa yeParis kunoratidzira Sarudzo yehurumende yeFrance kugadzira mushonga wecoronavirus unosungirwa kune vashandi vehutano uye kuunza nzvimbo yehutano yekuwana mabhawa, maresitorendi, dzimba dzemitambo nedzimwe nzvimbo dzeveruzhinji.
Kuratidzira kweMisa kwese nyika kwakaitika paBastille Day, kuyeukwa kwegore ra1789 kupenga kwegomba rine mukurumbira reParis iro rakatanga chimurenga cheFrance. MuParis, mapurisa akaridza misodzi yemisodzi kudzvinyirira vairatidzira.
Kuratidzira kwakaitika muFrance yose neChitatu nekukakavadzana kunoputika nemapurisa muParis. Mapurisa akapfura gasi rekuchema kune vairatidzira avo vakakanda matombo nemabhodhoro, vakaisa michina yekuvaka mumoto muParis, uye vakanhonga zvivakwa zvehurumende kuyambuka France, vachipindura Mutungamiri Emmanuel Macron anopesana-COVID-19 anofamba.
Mifananidzo nemavhidhiyo kubva kuguta guru reFrance zvakaratidza varatidziri vachimisa mabharanzi kubva kuzvinhu zvakawanikwa panzvimbo yekuvaka. Mimwe michina yekuvaka yakasiyiwa isina kuchengetedzwa yaive yakaiswa moto zvakare.
MuParis, vateereri vakaona vanhu vachitiza gasi rinoburitsa misodzi sezvo mapurisa akaiswa muzvizhinji kuti vaputse kuratidzira uku. Midzi mikuru yeguta inogona kuonekwa yakavharwa nevaratidziri nemapurisa. Mune chimwe chiitiko, gaba remhepo rinobvarura rakamhara padyo nenzvimbo yekudyira, zvichikonzera kuti vanodya vatadze mukati.
Zvemagariro enhau nezve kuratidzira kwaisanganisira ma hashtag #PassSanitaire uye #VaccinObligatoire, vachitaura nezve chiziviso cheMuvhuro chaMacron chekuti vashandi vezvehutano vanozofanira kubaiwa jekiseni re COVID-19 na Gunyana 15, kana kusangana nekurasikirwa nemabasa.
Kuratidzira kudiki kwakaitika kumwe kunhu muguta, mamwe mapoka achiungana kuPeople de Clichy.
Kutsamwa kweFrance hakuna kugumira kuParis, futi. Mavhidhiyo anobva kutenderera nyika anoratidza kuratidzira muToulouse neMarseilles kumaodzanyemba, Haute-Savoie kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva, neNantes kumadokero, pakati pedzimwe nzvimbo.
Kuratidzira kwakaitwawo muCorsica, uko vanhu vakaungana kushoropodza zvavakashora sekurwiswa kwerusununguko rwemunhu, vachikumbira kodzero "yekuva nesarudzo yavo" pamusoro pekubaiwa kweCCVID-19.
Sekureva kwemishumo yepamhepo, vanhu vanopfuura chiuru vakafora muguta rekumaodzanyemba kweFrance rePerpignan.